WOWOW Faucets ao an-dakozia miaraka amina famafazana Sprayer, Matte Black 304 Stainless Steel Arc ambony mitana misintona Faucet ao an-dakozia
Home / Fitaovana an-dakozia / Misintona Faucets ao an-dakozia / WOWOW Faucets ao an-dakozia miaraka amina paingotra mainty Matte Black Stainless
WOWOW Faucets ao an-dakozia miaraka amina vy manintona Matte Black Stainless Steel
naoty 4.50 avy tany 5 mifototra amin'ny 2 mpanjifa naoty
(2 mpanjifa famerenana)
Faucet an-dakozia vita amin'ny vy tsy misy fangarony miaraka amin'ny lohany manala ny lohany
- Amboary ny faucet dia ho mahafinaritra kokoa ny lakozia! Fitaovana filentehana milentika miaraka amin'ny sprayer!
Famolavolana BOLA GRAVITALY mahazatra, ataovy mora kokoa ny misintona sy misintona ny faucet. Ny bolan'ny hery misintona dia afaka misintona sprayer ho azy.
Matte Black FINISH dia fijery kanto be izay miasa miaraka amin'ny fomba haingo rehetra ho an'ny lakozia.
3 FIVORIANA TRANO dia mamela anao hiova mora sy ara-dalàna amin'ny tsifotra mankany amin'ny stream ary hampitombo ny fiasan'ny lakozia.
Mividy amin'ny Amazon
Mikarakara ny fahasalamanao - Mirehareha amin'ny vatan'ny vy tsy misy fangarony 304 sy ny varahina matevina, ity faucet an-dakozia ity dia manome taratasy fanamarinana CEC ary miantoka ny fiarovana ny rano. Matte ambonin'ny mainty dia manohitra ny harafesina, ny dian-tànana, ny harafesina ary mora diovina amin'ny lamba ho an'ny endrika madio sy kanto.
MODY LOHATENY 3 LOHATENY - Fiatoana / renirano / tsifotra. Maody mandeha tsara hamenoana rano (taham-pivoarana: 1.5 GPM), tsifotra mahery ho an'ny fanadiovana sy fanasan-doha mafy (tahan'ny fivezivezena: 1.7 GPM), ary miato kely hisorohana ny fikororohana amin'ny multitasking. Ny aerator ABS namboarina dia manome fikorianan'ny rano milamina sady mitsitsy rano hatramin'ny 50%.
FIVAVAHANA MANGANGANA - Ny fantson-drano efa napetraka dia manampy anao hametraka irery ao anatin'ny 20 mn tsy misy fantson-drano. Izahay koa dia manome takelaka boribory 8-inch (mety milentika lavaka 1 na 3).
SKU: 2312701B Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Misintona Faucets ao an-dakozia Tags: Faucet amin'ny lakozia, faucet an-dakozia miaraka amina spray spray, Fitaovana savoka an-dakozia, faucet an-dakozia vy tsy misy fangarony
21.34 * 11.1 * 2.83 santimetatra
Nosoloinay ity vokatra ity ny faucet an-dakozianay, ary namboarina tsara ny lakozianay. Manana torolàlana momba ny fametrahana antsipiriany izy io ka mora ny mametraka azy. Ny kalitao koa dia tsara. Mijery ary miasa tsy misy vato misakana. Ampirisihina mafy.
*** N y2021 / 04 / 23
Tena faucet milentika an-dakozia tokoa! Mora dia mora ny manaparitaka azy. Vita amin'ny vy tsy misy fangarony izy io ary avo lenta ny vidiny. Aza misalasala mandoa izany.